Imibhalo kaChris Donald on Martech Zone |
Imibhalo nge UChris Donald
UChris Donald unguMqondisi we-InboxGroup, i-ejensi yezentengiso ye-imeyili egxile ekuhlinzekeni izinsizakalo zokuthengisa ezenziwa yi-imeyili. Usebenze ngqo nezinkampani zeFortune 500, imidondoshiya yezitolo, ezingenzi-nzuzo, ama-SMB kanye nezinhlaka zikahulumeni kuzo zonke izici zezinsizakalo zabo zokumaketha i-imeyili zokucwaninga ama-imeyili kanye nezinhlelo ezisebenzisayo zokumaketha cishe amashumi amabili eminyaka. Uyakujabulela ukwabelana ngemicabango yakhe ehlukile kanye nokuqonda kwezindlela ezinhle kakhulu zokumaketha nge-imeyili kubhulogi lakhe.
NgoMsombuluko, Ephreli 15, 2019 NgoMsombuluko, Ephreli 15, 2019 UChris Donald
Ukumaketha nge-imeyili kuyindlela elula futhi ebiza kakhulu yokufinyelela izithameli zakho ezihlosiwe futhi uzigcine zisebenza. Kungaba ithuluzi lokushayela lemali engenayo lebelikade ulifuna! Ngecebo elifanele lokumaketha i-imeyili, ungafinyelela ukufinyelela okuthe xaxa kumakhasimende akho akhona nabangahle ubeke umlayezo wakho phambi kwezithameli ezinkulu. Inye inzuzo enkulu yokumaketha nge-imeyili ezinkundleni zokuxhumana